Al-shabaab oo markale dib ula wareegay degmada Aadan yabaal ee gobolka Sh/dhexe | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Al-shabaab oo markale dib ula wareegay degmada Aadan yabaal ee gobolka Sh/dhexe
Al-shabaab oo markale dib ula wareegay degmada Aadan yabaal ee gobolka Sh/dhexe
April 9 (Radio Baidoa)— Xoogaga Al-Shabaab ayaa maanta dib ula wareegay degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii Itoobiya oo 6-dii bishan la wareegay deegaankaas.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Itoobiya oo ay wehliyeen Ciidamo Soomaali ay dib ugu laabteen deegaanka Moqokori oo ka tirsan Gobolka Hiiraan.
Xoogaga Al-Shabaab ayaa dib ugu laabtay magaalada, kadib markii saddexdii cisho ee la soo dhaafay ku sugnaayeen duleedka Aadan Yabaal iyo deegaanada ku dhow dhow oo ay tageen markii ay Ciidamada Itoobiya soo galeen.
Dadkii ku dhaqnaa deegaanka ayaa isaga barakacay, ka hor inta aanay Ciidamada Itoobiya soo gelin degmada, iyadoo Al-Shabaab ay ka furteen ceelashii ku yaalay deegaanka, bamkii biyaha soo tuurayay.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in xaalada Aadan Yabaal ay tahay mid degan, iyadoo intii Ciidamada Itoobiya ku sugnaayeen deegaanka ay aheyd mid gebi ahaanba haawaneysay aanay cidina ku sugneyn
Ciidamada Itoobiya oo qeyb ka ah howl galka AMISOM ayaa markii hore howl galkooda waxaa uu ku ekaa Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo ay kaga sugan yihiin deegaano badan.
Degmada Moqokori ayaa u jirta Aadan Yabaal illaa 36KM, waxaana labadan degmo ay wadaagaan taariikho kala duwan, gaar ahaan beelaha wada dega oo horay colaado u dhex maray.